Talo wacan: Hadii aad dhaqankaan Leedahay waa hubaal in Naag kale lagula Guursanaayo | Gaaloos.com
Home » galmada » Talo wacan: Hadii aad dhaqankaan Leedahay waa hubaal in Naag kale lagula Guursanaayo
Talo wacan: Hadii aad dhaqankaan Leedahay waa hubaal in Naag kale lagula Guursanaayo
Nimanku marka ey ka yimaadaan Shaqada wexey Jecelyihiin in Guriga oo Carfaaya ay soo galaan wax walbana ay diyaaryihiin adiga Barafuunsan oo sanka lagula raacaayo laakiin hadii aad dhaqamadaan leedahay Ogoow Naag kale in lagula Guursanaayo waa Shaki La’aan.
1:- Hadii Marka uu Ninkaaga banaanka kasoo galo aad Howsha guriga bilaabeyso oo Guriga uusan Hagaagsaneyn, Caruurta ay Daryeel la’aan yihiin, Adiga aadan Qabeysan oo shiirkaaga laga cararaayo Ogoow Ninkaaga mid kale oo Carfeysa ayuu banaanka ka raadsan doonaaye.
2:- Hadii aad qeylo badantahay oo Ninka markuu shaqada ka yimaado aad Buuq iyo Rabsho ula joogto wuxuu karaahsanayaa in uu guriga yimaado sidaas darteed waxaa laga yaabaa in ay danta ku kalifto in uu Naag kale Guursado.
3:- Hadii aad Wareegtooy Lug cad tahay oo Cidaha dariska ah aad soo tirineyso oo marka Ninkaaga yimaado aad banaanka jirto ogoow Gacantaada Waxba kuma jiraan oo ninkaaga naag kale ayuu daydayan doonaa.
4;- Hadii aad tahay Naagaha Todobaadlayaasha ah ee Habeenka Jimcaha uun Jecel in ay Gogol wadaag sameeyaan ogoow ninkaaga Dareen ayuu leeyahay banaanka ayuu Qudbasiro ka sameysan doonaa.
Ugu Dambeyntii waxaan kuugula talineynaa Gabaryahey in Ninkaaga waxyaabaha uu Necebyahay aad iska deysid oo Gabar Baariyad ah Noqotid Nadaafaddana ku dadaal.
Title: Talo wacan: Hadii aad dhaqankaan Leedahay waa hubaal in Naag kale lagula Guursanaayo